Odisha သဲသောင်ပြင် Tours မှ | ကမ်းခြေ Enchanting - အခုတော့ 993-702-7574 Dial
အပန်းဖြေကမ်းခြေကုထုံးအဘို့အစွဲလမ်း? သဲကျောက်စရစ် '' Odisha သဲသောင်ပြင် Tours မှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်တယ်။ Odisha ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကမ်းရိုးတန်း၏ 485 ကျော်ကီလိုမီတာရှိသည်ဖို့အတွက် luckiest ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအသန့်ရှင်းဆုံးနဲ့စင်ကြယ်သောသဲအချို့တို့ကပြည့်စုံသည့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအပြာရေ, အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ် Odisha သဲသောင်ပြင် Tours မှများအတွက်အကောင်းဆုံးအထုပ်ကိုဆက်ကပ်။ ဒါဟာပါနေဝင်ဆည်းဆာအတွက်ယူနေစဉ် unwind ရန်ပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာပါပဲ။ အစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာလေဆိပ်အရေအတွက်များတဲ့နှင့်အတူ, Odisha ၏ကမ်းခြေသင်သည်သင်၏အိပ်မက်ခရီးစဉ်ယူများအတွက်ချောမွေ့စွာလမ်းကြောင်းအတွက် ပို. ပို. လက်လှမ်းဖြစ်လာရသည်။ Odisha အားလုံးရာသီအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုနှင့်အတူ, ကြီးစွာသောတစ်နှစ်ပတ်လုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်မှသာကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန်ကမ်းရိုးတန်း Odisha အတွက်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတည်နေရာပေါ် မူတည်. ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုဆိုလိုသည်, ထို။ Odisha ကမ်းခြေကတစ်သက်တာ၏အားလပ်ရက်ရှာကြံအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလှည့်ခရီးသည်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီးအောင်, ပဿဒ္ဓိလျှော့ပေါ့ဖို့ဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်း, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဗိသုကာမှထူးခြားဆန်းပြားဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမြှင့်တင်ရာမှအထိ။ Odisha သဲသောင်ပြင် Tours မှကအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ Odisha ကမ်းခြေ Tours မှ၏သဲကျောက်စရစ် '' အထုပ်နှင့်အတူထက်ကဤလက်ရာမြောက်သော shorelines ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏတွေ့ကြုံခံစားရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်အရိုက်ခံရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားသငျသညျကိုယူပြီးစဉ်ကဤ packages များ, ကမ်းလှမ်းရန် Odisha ရှိပါတယ်အရှိဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆိုဒ်များအချို့ကိုကြည့်ဆက်ကပ်။ သင့်ရဲ့တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လမ်းညွှန်များပြည်နယ်အနှံ့ spanning အရသာနှင့်စစ်မှန်အစားအစာခံစားပါဝင်သည်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခရီးစဉ်ပေါ်တွင်သင်ဦးတည်သွားစေ။ အတော်လေးသဲသို့သင့်ရဲ့ခြေချောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဘုနျးကွီးသောအပူပိုင်းအာရှနေရောင်ခြည်အတွက်ယိုဖိတ်နေကြနဲ့တူဘာမျှရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအားလုံးကိုသင်တတ်နိုင်သမျှမသိခဲ့ပါပဿဒ္ဓိတစ်စိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်၌သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ, အဒီလိုပါပဲအပြာကိုရေ၌ဆေးကြောပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်ဤအကောငျးဆုံးကရုဏာ shorelines ၏အဆုံးမဲ့အလှတရားကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပြီးပြည့်စုံသော Odisha ကမ်းခြေခရီးစဉ်ကိုကူညီရှာဖွေကြကုန်အံ့ပါ။ သငျသညျသဲကျောက်စရစ် '' Odisha သဲသောင်ပြင်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူအချိန်တစ် Gala ရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည် Odisha အတွက်သဲသောင်ပြင် Resorts အပါအဝင် Odisha ၌သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကမ်းခြေခရီးစဉ်လုပ်ငန်းရှင်များကိုဆက်ကပ်။
Odisha သဲသောင်ပြင် Tour Packages (ည /9ရက်ပေါင်း | tour Code ကို: 008)
တွေ့ဆုံနှင့်ကာလကတ္တားလေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှာဆိုက်ရောက်နှင့် pre-ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဟိုတယ်ကိုလွှဲပြောင်းအပေါ်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုများအခမဲ့နေ့ကိုအရာကြွင်းလေ။ နေ့ချင်းညချင်းကာလကတ္တားမှာ။
နေ့ 02: ကာလကတ္တား - Balasore - Chandipur
ကာလကတ္တားမှနံနက်စာတစ်ဝက်ရက်ကြာခရီးစဉ်နဲ့ Balasore မှရထားပေါ်ရန်မီးရထားဘူတာရုံမှာနေ့လည်ခင်းတစ်စက်ပြီးနောက်။ Balasore ရထားလမ်းဘူတာမှတက် Pick နှင့် Chandipur မှလွှဲပြောင်း။ ဟိုတယ်မှာစစ်ဆေးပါ။ နေ့ချင်းညချင်း Chandipur မှာ။
နေ့ 03: Chandipur
အပြည့်အဝနေ့က Chandipur သဲသောင်ပြင်ပေါ်အပန်းဖြေ။ နေ့ချင်းညချင်း Chandipur မှာ။
နေ့ 04: Chandipur - Bhubaneswar
en route ကိုရတနာဂီရိ, Udayagiri & Lalitgiri (ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်ပုထိုးတော်ကြီး) သွားရောက်ခြင်း Bhubaneswar မှနံနက်စာ drive ကိုအပြီးအဆိုပါနံနက်။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ
နေ့ 05: Bhubaneswar - Konark
Bhubaneswar မှာဗိမာန်တော်၏နံနက်အလည်အပတ်ခရီး (Parsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital) ။ ထိုအခါ en-လမ်းကြောင်း Dhauli (Ashokan အမိန့်ပြန်တမ်း) & Pipli (ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းရွာ) သွားရောက်ခြင်း Konark မှမောင်းတယ်။ မြစ်အနီးရှိညနပေိုငျးလှေကိုပင်လယ်ထဲကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်ကမ်းခြေပေါ်အပန်းဖြေ။ နေ့ချင်းညချင်း Konark မှာ။
နေ့ 06: Konark - Puri
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Konark Sun ကဘုရားကျောင်း (Black ကစေတီတော်), Chandrabhaga သဲသောင်ပြင်များနှင့် Ramchandi Temple.Then မှအလည်အပတ်ခရီးမှမောင်းထုတ် ပြည့်သော ဟိုတယ်အတွက်စစ်ဆေးပါ။ တိုက်ရိုက် Aalati Darshan တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သခင်ဘုရား Jagannath ဗိမာနျတျောနှောင်းပိုင်းမှနေ့လည်ခင်းအလည်အပတ်ခရီး။ ညဦးယံအချိန် Puri ၏ရွှေသဲသောင်ပြင် & သဲသောင်ပြင်စျေးအပေါ်ပြေစေပြီး။ နေ့ချင်းညချင်း Puri မှာ။
နေ့ 07: Puri - Gopalpur
Barkul မှာ Raghurajpur (အမွေအနှစ်ရွာ) နှင့် Chilika ရေကန်သွားရောက်လည်ပတ် Gopalpur မှနံနက်စာ drive ကိုပြီးနောက်သခင်ဘုရား Jagannath ဗိမာနျတျောမှနံနက်အလည်အပတ်ခရီး (non-ဟိန္ဒူဗိမာနျတျောအတှငျးအခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်), ဂရန်းလမ်း။ Gopalpur မှာ Kalijai ကျွန်း & Nalaban Birds ဂိမ်း Island.Overnight ကြည့်ရှုဖို့ရေကန်အတွင်းမှပီတိလှေခံစားပါ။
နေ့ 08: Gopalpur - Taptapani - Gopalpur
Taptapani ဟော့ဆာလ်ဖာနွေမှနံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးပြီးနောက်။ နေ့လည်ခင်း Gopalpur သဲသောင်ပြင်ပေါ်ပြေစေပြီး။ နေ့ချင်းညချင်း Gopalpur မှာ။
နေ့ 09: ထွက်ခွာ - Berhampur မီးရထားဘူတာ / Bhubaneswar လေဆိပ်
ထိုနောက်လမ်းခရီးဘို့ Berhampur မီးရထားဘူတာ / Bhubaneswar လေဆိပ်မှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ။